Fotoana fandefasana: Sep-03-2021
Ny fangatahana vy amin'ny fiarahamonina maoderina dia tsy mitsaha-mitombo. Amin'ny fiainana andavanandro, zavatra maro no vita amin'ny vy, ary metaly maro no tsy azo alefa miaraka amin'izay. Noho izany dia ilaina ny mampiasa welding elektrika ho an'ny welding. Ny anjara asan'ny electrode amin'ny fizotran'ny welding dia tena importa ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fisafidianana sy fanomanana electrode tungsten ho an'ny GTAW
Fotoana fandefasana: Aug-23-2021
Ny fisafidianana sy ny fanomanana electrode tungsten ho an'ny GTAW dia tena ilaina mba hanatsarana ny vokatra ary hisorohana ny fandotoana sy ny famerenana amin'ny laoniny. Getty Images Tungsten dia singa vy tsy dia fahita firy ampiasaina hanamboarana elektrônaly las tungsten arc welding (GTAW). Ny fizotry ny GTAW dia miankina amin'ny hamafin'ny hafanana sy ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Aug-17-2021
Ny welding electrode arc no fomba be mpampiasa indrindra amin'ny famokarana indostrialy. Ny vy hodiovina dia tsato-kazo iray, ary ny electrode no andry faharoa. Rehefa mifanakaiky ireo andry roa ireo dia mamorona arc. Ny hafanana ateraky ny fivoahan'ny arika (fantatry ny besinimaro ho fandoroana arko) ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fizotran'ny welding amin'ny arc welding - SMAW
Fotoana fandefasana: Jul-27-2021
Welding Arc amin'ny Shielded Metal (fohy amin'ny SMAW). Ny fotokevitra dia: ny arc dia miteraka eo anelanelan'ny electrode mifono sy ny metaly ifotony, ary ny fomba famafana mampiasa ny hafanana arko mba handevonana ny electrode sy ny metaly ifotony. Ny sosona ivelany amin'ny electrode dia rakotry ny flux welding ary miempo rehefa ...Hamaky bebe kokoa »
Inona avy ireo karazana welding sy ny fomba hahatongavana ho welder
Fotoana fandefasana: Jul-22-2021
Ny Welding dia ny kanto fampiraisana ireo metaly sy fitaovana hafa miaraka. Izy io koa dia misy singa toy ny fanatsarana ny endrika sy ny famokarana. Ny welding dia mety ho asa mahafa-po, fa tokony hahafantatra zavatra vitsivitsy hafa ianao alohan'ny hahatratraranao ny tanjona tadiavinao. Raha te ho lasa matihanina amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Toerana efatra amin'ny fantsom-by herinaratra sy fantsom-pahazavana: fantson-tànana ambony, fantsom-bozaka, fantsom-boanjo ary fametahana marindrano
Fotoana fandefasana: Jul-21-2021
Ny toeran'ny welding dia antsoina hoe welding, ny toerana misy ny spatial an'ny weld amin'ny welder. Sary 1. Tianqiao welding positon Misy fisaka fisaka, fantsom-pamokarana, fantsom-bozaka ary fehy ambony. Ny fantsom-bozaka dia manondro ny fehin-kibo mitsivalana ataon'ny welder ...Hamaky bebe kokoa »
Ny mari-pana momba ny dobo filomanosana sy ny famafana ny welding amin'ny tanana
Fotoana fandefasana: Jul-15-2021
Mandritra ny fangejana fusion, eo ambanin'ny asan'ny loharano fantsom-panafody, ny ampahany metaly misy metaly misy endrika geometrika namboarina tamin'ny fantsom-by vy vita amin'ny vy elektroda sy ny metaly fototra an-idina dia ny dobo nandrendrika. Aorian'ny fampangatsiahana dia lasa lasitra izy, noho izany ny mari-pana amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Ny sandan'ny tsenan'ny robot welding vy avy amin'ny 2021 ka hatramin'ny 2025 dia USD 62413 tapitrisa
Ny tsenan'ny robot welding arc dia hitombo amin'ny $ 62413 tapitrisa US, miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana fatratra isan-taona mihoatra ny 4% eo anelanelan'ny 2021-2025. Ny tatitra dia manome ny fanadihadiana farany momba ny toe-javatra eo amin'ny tsena ankehitriny, ny fironana farany sy ny antony mitondra ary ny tontolon'ny tsena amin'ny ankapobeny. Technavio's in-d ...Hamaky bebe kokoa »
Torohevitra ilaina amin'ny fisafidianana electrode welding
Fotoana fandefasana: Jul-07-2021
Ny fisafidianana electrode welding araka ny firafitry ny simika, ny toetoetran'ny mekanika, ny fepetra takiana amin'ny anti-cracking, miaraka amin'izay koa, ny firafitry ny welding, ny hatevin'ny vy, ny toe-javatra iasana, ny adin-tsaina, ny fahombiazan'ny welding ary ny antony hafa analys ... Hamaky bebe kokoa »
Nahitana fahombiazana lehibe ny sary sokitra vy voalohany nataon'ny mpanamboatra tanàna Kansas
Jeremy "Jay" Lockett avy any Kansas City, Missouri no olona voalohany nilaza taminao fa tsy ara-dalàna ny zavatra rehetra nataony tamin'ny asany mifandraika amin'ny welding. Ity tovolahy 29 taona ity dia tsy nandinika ny teôria welding sy terminolojika tamim-pitandremana sy fomba fomba, ary avy eo nampihatra izany tao anaty fitoeram-bola ...Hamaky bebe kokoa »
Ss Welding Electrode, vy vy, electrode welding, Tsorakazo vy tsy mitovy, Atsofohy vy vy vy, Kavina vy 1.5 Mm,